Serivisy Dropshipping, Sourcing amin'ny vokatra, vidiny ambongadiny - NeXTchain
Serivisy fanatontosana tsara indrindra sy fanatanterahana
Vahaolana Dropshipping amin'ny alàlan'ny rehetra hanampiana anao hitahiry fotoana bebe kokoa ary ahazoana tombony avo
100% azo antoka ary afaka. Tsy mila carte de crédit.
Dropshipping tsara indrindra
NeXTChain dia vahaolana iray mitete ho an'ny ecommerce. Manome vokatra tsara amidy izahay, mivarotra, manatanteraka ny baiko, manara-maso fonosana ary manamboatra fonosana sy marika sns tsy mila miahiahy momba ny lisitra, ny fotoana fandefasana ela na ny kaontinao Aliexpress voasakana.
Afaka manome serivisy fanatanterahana matihanina any Shina izahay. Azonao atao ny manova ny baiko Aliexpess, Alibaba ary taobao mba hotanterahin'i NextsChain. izahay dia hanampy anao hitantana ny kaomandinao sy ny fanatanterahana ny lisitra, hanome anao ny vahaolana fanatanterahana tsara indrindra.
Amboary ny fonosana sy ny marika
Ny NeXTChain dia manampy anao hanamboatra ny sary famantarana ny marikao amin'ny boaty, kitapo ary kasety. Ary izahay koa dia manohana ny fanaingoan'ny OEM & ODM ny sary famantarana ny marikao amin'ny entana amboaranao.
Inona no mampiavaka antsika?
Vokatra an-tapitrisany kokoa
Ny mpanjifa dia hanana mpamatsy isan-karazany ambony ary misafidy amin'ny plethora misy vokatra mihoatra ny 500,000 amin'ny vidiny ambongadiny. NeXTChian dia manome ihany koa ny vokatra Mandresy sy ny vokatra fironana hanampiana ny mpivarotra hitantana ny asa fivelaran'izy ireo.
Fanohanana an'i Buck Edit
Ny NeXTChain dia manome fitaovana fampiasana fanovana Buck tsara kokoa sy mora kokoa hahafahanao mitantana ny vokatrao ao anaty lisitra amin'ny fotoana fohy kokoa. Afaka manam-potoana bebe kokoa ianao handinihana ny varotrao sy ny varotra varotra hafa.
Manafatra haingana kokoa
Ny NeXTChain dia mamela anao hametraka baiko 100 amin'ny minitra, haingana kokoa noho ny fitaovana hafa! Mitsitsia fotoana ary mahazoa fahombiazana miaraka amin'ny mpiara-miasa dropship AliExpress!
Drafitra Maimaimpoana Mandrakizay
Manome drafitra maimaimpoana mandrakizay izahay
App NeXTChain miaraka amina famolavolana mamaly tsara, miasa tsara amin'ny finday finday finday, latabatra na solosainao PC. azonao atao ny mitantana ny orinasam-pitetezanao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra.
Filaharana fanatanterahana Auto
Fandefasana haingana sy maimaim-poana
Mila 5 - 8 andro fiasana hahatratra ny Etazonia, 3-8 andro mankany Japon, Korea, Singapore, Malezia. Ary manodidina ny 4 - 10 andro hahatongavana any Canada, Australia, Mexico, na amin'ireo firenena EUR.
Raha manao orinasa dropshipping miaraka amin'ny oberlo ianao taloha. tsy vitan'ny hoe manampy anao hanafohezana ny fotoana fandefasana sy ny fanaingoana manokana ny marikao ny vokatrao izahay, fa hanampy anao koa hanafatra ny vokatra avy any oberlo mankany NeXTChain miaraka amina tsindry vitsivitsy monja fa tsy handika tsirairay.
Fanaraha-maso sy fitantanana fonosana
Miaraka amin'ny rafitry ny fizotran'ny fonosana Manan-tsaina, mamela anao hitantana tsara ny fonosanao i NeXTChain, azonao atao tsara ny mamantatra hoe aiza ny fonosanao ary rahoviana no halefa. Mba hisorohana ny tarainan'ny mpanjifa betsaka sy fitsitsiana fotoana be dia be.
Serivisy fitantanana inventarina amin'ny fotoana tena izy, ary fanavaozana ny fampandrenesana ny vidiny mandeha ho azy araka ny fitsipika. Safidy tsara amin'ny AliExpress.
Mampifandray amin'ireo sehatra ecommerce sy tsena ireo izahay
Ny lozisialy eto amintsika
Fitsinjarana an'izao tontolo izao!
Manome izahay 500,000+ vokatra tsara kokoa miaraka amin'ny vidin'ny ambongadiny
Ajanony ny fandaniam-bola amin'ny vokatra ratsy, manome ny vokatra azo azo amidy amin'ny fivarotana ny NeXTChain.
Kiraro sy kitapo
Ankizy sy kilalao
Firavaka & famantaranandro
Ity rindrambaiko ity dia mpamadika lalao vokatra tsara amin'ny fotoana fandefasana entana ary efitrano lafo vidy ahazoana tombony ireo mpiasan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa no tsara indrindra natrehiko tamin'ny fotoana nahalasa olana ahy ary namboarina tao anatin'ny fotoana mety tamin'io andro io ihany. Fampiharana mahafinaritra. Ny entana marobe dia fandefasana maimaim-poana
Nisafidy an'ity fampiharana ity aho satria te hanolotra fandefasana entana haingana any UK (ary mety manerantany, amin'ny farany) satria be loatra ny fotoana fandefasana 20-40 andro avy amin'ireo mpamatsy hafa. Manana niche manokana momba ny vokatra aho, noho izany dia somary natahotra aho sao voafetra ny safidiko, saingy misy entana. Manana vokatra 160 mahery miandry ny hafarana aho, ary tsara tarehy daholo. Ny anaran'ny vokatra dia tsara sy milamina, ny vidiny mirary amin'ny dropshipping sns. Mbola tsy nahazo baiko tamin'ny alalàn'izy ireo aho (IR ...
Efa 2 volana aho farafahakeliny nanana an'ity fampiharana ity talohan'ny nanoratako ity hevitra ity. Ho an'ny hevitra maro omena amin'ny andro voalohany fampiasana. Ity dia fampiharana tsara. Nahavita lamina santionany aho izay nalefa tamin'ny fotoana voalaza araka ny voalaza. Nanafatra vokatra 150 farafaharatsiny aho tamin'ny fahombiazana. Nifandray tamina fanohanana farafahakeliny 5 aho tamina valinteny ara-potoana tena maika isaky ny mandeha. Hanoro hevitra an'ity fampiharana ity amin'ny olon-drehetra aho. Misaotra betsaka NeXTChain! manampy an'ity famerenana ity aho. Tiako ny hampahafantatra ny olon-drehetra ny tena niainako niaraka tamin'i Ne ...
Boutique Boutique OM
Faly be aho amin'ny Nextschain. vokatra betsaka azo raisina sy serivisy fitafiana lehibe. Nanana olana aho ary nanampy ahy avy hatrany izy ireo ary nanamboatra izany ho ahy. misaotra betsaka NeXTChain.
Mpankafy divay sy kafe
Efa am-bolana maro aho no nampiasa an'ity fampiharana ity ary izao no andehako mankany amin'ny app ho an'ny fivarotako. Nahita vokatra tato aho izay tsy hitako tamin'ny fampiharana fanatanterahana hafa. Tsy te hampiasa oberlo aho ary hampiasa aliexpress satria mahatsiravina ny fotoana fandefasana ary mila miatrika mpivarotra an-tapitrisany ianao. NeXTchain no mikarakara ny zava-drehetra. Mahazo baiko ianao ary mandoa ny ambongadiny ary fonosin'izy ireo sy alefany ny vokatra ary mandefa ny mailaka fanamafisana ny sambo. Raha sendra olana ianao dia miverina aminao izy ireo ary ...
Raha mitady hanomboka dropshipping ianao amin'ity taona 2020 ity dia aza mijery ny manodidina anao fa eo amin'ny toerana mety, Nextchain dia manana ny fanampiana sy ny fitaovana rehetra hahombiazanao raha manana olana ianao, ny serivisy ho an'ny mpanjifany dia potsitra vitsivitsy fotsiny hanampy ianao ary mamaha sy manamboatra ny olanao. Nextchain no fifanarahana.
Serivisy fandefasana entana lehibe tsy mampino. Tsara lavitra noho ny fampiharana sourcing sy fandefasana rehetra nataoko. Misaotra tamin'ny asa tsara sy nanatsara ny dropshipping.
Voalohany, sendra sendra an'ity vokatra ity aho ary tsy afaka ny ho falifaly noho ny nataoko! raha sendra io aloha aho dia ho nitahiry fotoana betsaka aho. Tsara ny sehatr'izy ireo, manolotra kasety fandefasana entana ary boaty hanampiana anao amin'ny fananganana ny marikao, sns. Ny drafitra maimaim-poana ataon'izy ireo dia manome drafitra LEHIBE ho an'ireo mpandeha mitete voalohany, ahafahanao manampy vokatra 1.000! Ny fotoana fandefasana any Etazonia dia manodidina ny 5-9 andro, izay tena tsara raha oharina amin'ny Aliexpress sy orinasa hafa. Afaka nanararaotra nampiasa azy ireo aho ...
Vaovao momba ny fandefasana entana any amin'ny fivarotako aho. NeXTChain dia nirongatra ho serivisy fandefasana mailaka. Satria tsy azoko antoka hoe inona no hatao, nampiasa ny boaty Chat aho hiresahana amin'ny mpanampy namana iray manam-pahalalana izay nanazava tamiko ny serivisy. Nahazo toky aho fa haingana ny fandefasana ary miaraka am-pitandremana. NeXTchain dia efa vonona ho ahy ny mombamomba ny vokatra. Ankasitrahako ny fiheverana manokana omen'izy ireo amin'ny antsipiriany, izay mitsitsy fotoana. Martinez
Ampidiro ny App NeXTChain
Ampidiro ao amin'ny fivarotanao fivarotana ny app NeXTChain.
Mametraha kaomandy amin'ny tsindry 1 ary mandoa vola ho an'ireo mpamatsy Nextchain.
Mametraha kaomandy ary aloavy amin'ireo mpamatsy NeXTchain.
Sambo avy amin'i Nextschain
Ny fandefasana kaomandy amin'ny mpanjifanao avy any amin'ny Ne warehouse warehouse.